Maleeshiyada Al-Shabaab oo gubay tuulada Budbud ee gobolka Galgaduud - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo gubay tuulada Budbud ee gobolka Galgaduud
September 8, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Tuulada Budbud oo ay Al-Shabaab gubeen.
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya tuulada Budbud maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dab qabadsiisay tuuladaas oo kutaala gobolka Galgaduud.
Sababta ay Al-Shabaab u gubeen tuuladaas ayaa la aaminsanyahay in ay tahay dadka tuuladaas oo soo dhaweeyay ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya markii maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaankaas haysatay ay ka baxeen labo beri kahor.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sidoo kale jaray isgaarsiinta tuulada Budbud.
Tuulada Budbud ayaa hoostagta magaalada Dhuusa-mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Ciidamada dowlada Soomaaliya oo labo beri kahor qabsaday tuulada ayaa isaga baxay taasoo keentay in maleeshiyada ay markale dib ugu soo noqdaan.
July 14, 2016 Ciidamada nabadsugida Soomaaliya oo ku fashiliyay Muqdisho weerar gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay